जीवनकै कठिन मोडमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले किन दिए देउवा, प्रचण्ड र माधवको एक-एक पोल खोलिदिने चेतावनी ? – GALAXY
जीवनकै कठिन मोडमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले किन दिए देउवा, प्रचण्ड र माधवको एक-एक पोल खोलिदिने चेतावनी ?
काठमाडौं। विगत केही समयदेखि चरम विवादमा पर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवाराले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको एक एक पोल खोलिदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी सत्तारुढ गठबन्धनबाट आफूविरुद्ध अफवाह फैलाउने काम भएको भन्दै कडा आक्रोश पोखेका छन्।